Usoro 'Chucky' nke Teaser na-ewetara nwa bebi azụ na mgbọrọgwụ ya (Red)
Mbido Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ Usoro 'Chucky' nke Teaser na-eweta Azụ nwa bekee na mgbọrọgwụ ya (Red)
Usoro 'Chucky' nke Teaser na-eweta Azụ nwa bekee na mgbọrọgwụ ya (Red)
by Timothy Rawles July 16, 2021
by Timothy Rawles July 16, 2021 3,723 echiche
Anya ndị na-acha anụnụ anụnụ - mbinye aka ahụ na-achị ọchị; mbụ Chucky laghachi na usoro ohuru nke otu aha maka SYFY na ihe omimi di egwu nke gbadara taa!
Ihe egwu egbu a maara nke ọma na-achazigharịkwa ndị mmadụ ọzọ, na ụwa egwu na nke ahụ bụ nnukwu akụkọ nyere ikike niile dị n'azụ usoro a; ị nwetara mbụ kere Don Mancini na ya họọrọ troupe nke-eme ihe nkiri – ụfọdụ mkpakọrịta nwoke na nwanyị niile n'ụzọ azụ mbụ. Nke a gụnyere Jennifer Tilly, Fiona Dourif, Alex Vincent, Christine Elise, na n'ezie olu n'azụ nsogbu Brad Dourif.
Ndị bịara ọhụrụ Lexa Doig (Jason X) na Devon Sawa (Njedebe Ikpeazụ) weputara ndi n’egwuregwu ohuru nke ndi n’eto egwu.
"Onye bụ isi bụ nwata nwoke dị afọ 14 nke nwoke na nwanyị na-emegbu onwe ya na ụdị nke furu efu mgbe nne ya nwụsịrị," Mancini gwara EW. “Ọ bụ onye na-eto eto na-ese ihe [nke na-akpụ] ihe osise ndị nwere akụkụ ụfọdụ nke nwa bebi. Ọ chọtara Chucky n'ahịa ire ere wee zụta ya, mana ọ na-enwetara na ọ karịrị karịa nke ọ gbara ego. ”
Mancini na-arụsi ọrụ ike na -emepụta usoro isiokwu a site na ọrịa na-efe efe. Ọ na-egosi n'oge a ọ na-enyefe aha mbụ nke aha ahụ site n'inye Chucky obere sidekick. Agbanyeghị, n'adịghị ka nke mbụ Chucky jiri nwata nwanyị dị afọ isii rụọ ọrụ, oge a Gen Z-er (Arthur) nwere nsogbu na-agbachitere.
Mancini na-agbakwụnye, sị: “Otu n'ime ihe m chọrọ ime bụ iweghachi [aha aha] na ya Egwuregwu Ụmụaka mgbọrọgwụ ma nwee ndị protagonists [bụrụ] ụmụaka. Ma ebe ọ bụ na, mgbe anyị lụrụ di na nwunye mbụ fim, anyị amataworị inwe obere ụmụaka achọrọ m ịchọpụta ihe dị iche, ya mere n'oge a, anyị na-agagharị na-eto eto. ”
Teo Briones, Alyvia Alyn Lind, na Björgvin Arnarson sokwa kpakpando.
Y’oburu n’iche na Chucky n’ile anya, anya di nma! The ebu maka nwa bebi na-iwere kpọmkwem site na Egwuregwu ụmụaka. Usoro ọhụrụ a ga-amalite na channelụ SYFY malite na Ọktọba 12, 2021, ọ ga-enwekwa 8 ngosipụta
Mancini na-ekwu na ọ bụrụ na ihe ngosi a ga-aga nke ọma, a ga-enwe ọtụtụ oge ga-abịa.
Lelee teaser dị n'okpuru ma na-agbaso iHorror maka ozi ndị ọzọ gbasara usoro egwu ọhụrụ a na-akpali akpali.
Ewere isi Nkwụnye isi na EW.com.